nhandaro uye varaidzo | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Rudzi: kurega nekuvaraidza
Kadhi reIsita rakagadzirwa nemapepa ane mavara
Basa redu ranhasi rinenge riri reEaster. Chichava kadhi repositi rakagadzirwa nemavara mapepa uye yakaratidzwa mune ino tenzi kirasi.
Isita yevana veIsita muchimiro chezai repepa
Ichi chigadzirwa cheIsita chakaitwa nevana kuwedzera kwakanaka kune zviyeuchidzo zvezororo. Vakuru vari kugadzirira kupemberera zororo rino rakajeka, kutenga chikafu muzvitoro, kukoka vaenzi, asi vana zvakare vanorota kutora chikamu mukugadzirira.
Maitiro ekukusonera chigadzirwa che Clown nemaoko ako pachako
Mazororo egore Idzva evana anofanira kunge achifadza. Uye kune izvi iwe unoda chipfeko checarnival. Muchikamu chino ndinoda kutaura nezvekuti ungasone sei chipfeko checlown nemaoko ako. Mitemo yakapusa Mu ...
Dhiragoni yaGardner: DIY Optical illusion
Optical fungidziro haisiye vasina hanya kana vakuru kana vana, vanovanyudza mune imwe nyika yenyika yemashiripiti uye panguva imwechete inoita kuti huropi hubike kubva mukukona kwekuona. Dzimwe nguva hunyengeri haunetsi kunzwisisa. ...
DIY dzungu kutakura: tenzi kirasi, nhanho nedanho mirairo. Autumn machipisi kubva kumiriwo
Pfungwa yekushandisa manhanga semidziyo yezvigadzirwa yakatanga kuuya mupfungwa yengano kubva mungano yaCharles Perot. Asi tichinyatsotaura, mhando dzemusango dzebheri iri muchimiro chakaomeswa dzakashandira ...
Maitiro ekugadzira piramidhi kana kushamisika chechinomwe chepanyika pamba?
Kubva panguva dzekare, imwe ye "maparera" ezvishamiso zvinomwe zvepasi zvinoonekwa sePiramidhi Huru muGiza reEjipitori. Yakavakwa anopfuura mamirioni mana nehafu apfuura kune rimwe remapharaohs ane mukurumbira - Khufu, kana ...
Scrapbooking puncher: kusarudza uye kushandisa
Iye zvino vanhu vazhinji vanosarudza sekuvaraidza chero chiitiko chine chekuita nekugadzira zviyeuchidzo nemaoko avo. Ukasarudza kugadzira maalbum, mifananidzo, maposikadhi kana zvimwe zvigadzirwa uchishandisa yekushongedza bepa kana kadhibhodhi, ...
Maitiro ekugadzira Papuan chipfeko nemaoko ako pachako?
Mapati evana uye mapato ane tema evakuru dzimwe nguva anokuita kuti unyatsofunga pamusoro pesarudzo yemufananidzo. Kutenga zvipfeko zvakagadzirwa muzvitoro zvine hunyanzvi hakusi kunakidzwa kwakachipa nguva dzese. Saizvozvo ...
Yakarukwa chirafu - fashoni chishongedzo kwechando chando
Chirafu chinodziya uye chinoshanda chakarukwa neshinda-yemvere shinda chichava chinhu chakakosha mumwaka unotonhora. Ehezve, iyi ndiyo kumberi kwehembe. Chishongedzo chakarukwa kana chakakoshwa chichava chinhu chakashongedzwa chechero kutarisa. ABOUT…
"Ndiri kubhururuka": mabasa uye vatambi. "Ndiri kubhururuka": zano remufirimu
Hupenyu hwevadzidzi vekurapa hauna kumbosiyana neupenyu hwemumwe mudzidzi: bvunzo, zvikamu uye zororo munguva yavo yemahara. Asi, kutanga kubva pagore rechina, chiremba wese anouya anofanira ...
Fatma Sultan uye mutambi weTurkey uyo akamutamba, Meltem Jumbul
Makore akati wandei apfuura, nhepfenyuro yeTurkey nhepfenyuro "Iyo Inoshamisa Century" ("Muhteşem Yüzyıl") yakaonekwa. Yakataura nezvenguva yekutonga kweHurumende yeOttoman, inonyanya kuremekedzwa nevanhu veTurkey, Sultan Suleiman. Kwemwaka mina, vaoni vakakwanisa kuziva ...
Tamba "Pushkin's Tales", Theater of Nations: wongororo. Robert Wilson director, vatambi
Musi waJune 6, 2015, chiitiko chakaitika munhandare yenyika iyo isina kusiya vasina hanya nevaoni kana vashoropodzi. Uku ndiko kuratidzwa kwemutambo "Pushkin's Tales" (Theater of Nations), wongororo dzacho dzinogona kunzwika dzinopesana zvakanyanya ...
Mwanasikana Orbakaite - Claudia
Magamba edu anhasi mwanasikana mudiki waOrbakaite. Anopfuura makore mana apfuura, muimbi akapa murume wake Mikhail Zemtsov musikana. Mwana akanzi Claudia. Mikhail akapa mwana zita remukadzi wake - ...
Tamara Makarova - mukadzi wekutanga weSoviet cinema
Mabasa ake akafuridzira chishuwo chekutevedzera mamirioni evakadzi veSoviet. Mifananidzo iyo yaakaronga pachiratidziri yakaita kuti mwoyo yevarume vazhinji ikurumidze kurova, asi rudo rwake rwakapiwa kuna mumwe chete Sergey Gerasimov. Ano…
Iyi firimu "Imwe Yakabhururuka Pamusoro peNesti yaCuckoo": wongororo. Imwe Yakabhururuka Pamusoro peNesti raCuckoo: vatambi uye mabasa
Imwe Yakabhururuka Pamusoro peNesti yaCuckoo ndeimwe yemabasa akanakisa engano mumabhuku eAmerica. Iko kuchinjika kwebhuku raKen Kesey rave rave bhaisikopo. Sangano reAmerica rakaona sei iyo firimu nezvedambudziko rakaipa remupanduki, uye ...
Dzidza maitiro ekudhirowa Frozen. Ivo vanonyanya kutaurwa vekatuni
Elsa, heroine wekatuni "Frozen", akakanda huroyi pahumambo hwese. Uye zvino permafrost yauya kuvanhu. Kune izvi, Elsa akatanga kunzi Mambokadzi weSinou. Hanzvadzi yake Anna ari kuedza kumuponesa ...
Red Data Bhuku reSverdlovsk Dunhu: Mhuka uye Zvirimwa
Iyo Red Data Bhuku reSverdlovsk Dunhu igwaro rakakosha mune izvo zvisingawanzo uye zvine njodzi mhuka nezvirimwa zvemudunhu zvakanyorwa. Zvinonakidza kuti rondedzero yakafanana yaivapo pakutanga, asi yaisanganisira vagari vemuMiddle yose ...
A. Platonov mabasa, pfupiso. "Wakakahadzika Makar"
A. Nyaya yaPlatonov - tinopa zvirimo zvipfupi - "Doubted Makar" yakanyorwa muna 1929. Icho, muchokwadi, chinotsanangura maitiro ekuberekwa kwehurongwa mune diki mamiriro. Uye munhuwo zvake ...
Imitambo "Millennium": repertoire, troupe, wongororo
Iyo Millennium Theatre yakavhurwa makore anopfuura gumi apfuura. Boka rake rinoshandisa vatambi vane mukurumbira uye vanozivikanwa kune vakawanda vateereri kubva kuTV akateedzana uye mafirimu mafirimu. Iyo repertoire yemitambo inosanganisira zvesimba zvemhando dzakasiyana - comedies, ...
"Maleficent". Vatambi vemufirimu ngano nezve kushivirira
Iyo Disney movie ngano Maleficent neakanaka Angelina Jolie muchimiro chemapapiro uye ane runyanga inoshamisira iye anoona kwete zvakanyanya nemhedzisiro mhedzisiro senge ine yetsika meseji uye general ideology. Icho chakavakirwa pasirese inozivikanwa ngano ...
peji 1 peji 2 ... peji 1 Next Page
Mibvunzo ye61 mu database yakagadzirwa mu 2,386 masekondi.